BYJU'S – The Learning App 5.4.2.6853 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.4.2.6853 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ပညာေရး BYJU'S – The Learning App
BYJU'S – The Learning App ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
BYJU'S-အဆိုပါသင်ယူ App ကို၎င်း၏ platform ပေါ်တွင် 16 သန်းမှတ်ပုံတင်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူကျောင်းမှကျောင်းသားများအတွက်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသင်ယူမှု App ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ app အတန်း 4th-12 အကြားကျောင်းသားတွေအတွက်သင်္ချာနှင့်သိပ္ပံများတွင်ပြည့်စုံသောသင်ယူမှုအစီအစဉ်များကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအစစသည်တို့ကို CAT, NEET & JEE, ို့နှငျ့ဆကျ, GRE & GMAT နဲ့တူယှဉ်ပြိုင်စာမေးပွဲအဘို့စမ်းသပ် prep သင်တန်းများရှိပါတယ်
ဒီ app visualization များအတွက်အနုပညာနည်းပညာ၏ပြည်နယ်သုံးပြီးတည်ထောင်သူ CEO ဖြစ်သူ Byju Raveendran အပါအဝင်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးဆရာများအနေဖြင့်အတန်းရှိပါတယ်။ BYJU'S 600+ အဖွဲ့ဝင် In-အိမ်သူအိမ်သား R & D အဖွဲ့သည်လုံးဝအိမ်တော်၌ app ကိုတီထွင်ခဲ့ကြပြီးအဆက်မပြတ်ကြောင့် ပို. ပင်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နှင့်ထိရောက်သောအောင်အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ app ကို၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းတစ်ခုချင်းစီ၏သင်ယူမှုနှင့်တိုင်းကျောင်းသားများ၏တစ်ဦးချင်းစီအရှိန်အဟုန်နှင့်စတိုင်အပေါ်အခြေခံပြီးလေ့လာသင်ယူ personalises ။
BYJU'S အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုကျောင်းသားများအတွက်, ဒါပေမယ့်လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပဲထိရောက်သောသင်ယူခြင်းအောင်ရာထူးကိုင်ဆောင်သူပတ်လည်ရှိစုပြုံပြွတ်သိပ်ချိုးထားတဲ့ကာ All-အားလုံးပါဝင်နိုင်မော်ဒယ်တီထွင်ခဲ့သည်။ အစီအစဉ်များကိုလေ့လာသင်ယူအဆိုပါ BYJU'S သာ '' toppers '' များအတွက်သင်ယူမှုနှင့်မနှင့်အတူမေတ္တာ၌ '' တိုင်း '' ကျောင်းသားကဆြုံးစေဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
• လေ့လာပါ - ကိုဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများနှင့် BYJU'S Rockstar R & D အဖွဲ့ကဒီဇိုင်းစိတ်ကြိုက်သင်ယူမှုခရီးပါဝငျ မှစ. ။
• စမ်းသပ်ခြင်း - တိုင်းကျောင်းသားများ၏သင်ယူမှုလိုအပ်ချက်မှစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ကြောင်းမျြးအခနျးကွီးပညာရှိသစမ်းသပ်မှုနှင့်အတူစုံလင်ခြင်း အလေ့အကျင့်။
• Analyze - ဒီ app စိတ်ကြိုက်စမ်းသပ်မှုများနှင့်ကျောင်းသားများကမွေးစားစိတ်ကြိုက်သင်ယူမှုလမ်းကြောင်းအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦး In-depth ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြေး။ ပိုကောင်းစီစဉ်ရန်သင့်တိုးတက်မှုကိုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ View နှင့်သင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
• ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင် - တစ်ခုချင်းစီရဲ့ module တစ်ခုသဘောတရားများကိုသူတို့ရဲ့နားလည်မှုစုံလင်သူတို့စာမေးပွဲအတွက် excel ကိုကူညီကျောင်းသားများအတွက်တည်းဖြတ်မူနှင့်အလေ့အကျင့်အစည်းအဝေးများပေးထားပါတယ်။
• စာမေးပွဲသည်နှင့် ကျော်လွန်. - အဆိုပါ module တွေကြောင့်အတန်း 6-10 နှင့်ပြည့်စုံ IIT JEE အဘိတ်များနှင့်အဘို့အ AIPMT အဘိတ်အားလုံးကိုပြည်နယ်အဆင့်ဘုတ်အဖွဲ့, ICSE နှင့် CBSE သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏ပြီးပြည့်စုံလွှမ်းခြုံကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းတစ်လမ်းအတွက်စီစဉ်ထားရှိပါသည် အတန်း 11-12 ။
အင်္ဂါရပ်များ (ယှဉ်ပြိုင်စာမေးပွဲ prep)
CAT Aspire အဘို့, Byju နှင့် PN Santosh (CAT ကို 100 ရာခိုင်နှုန်း) သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့် (200 မျြးအခနျးကွီးပညာရှိစမ်းသပ်မှုကျော်) ပြီးပြည့်စုံသောစမ်းသပ်စီးရီးနှင့် 20 အပြည့်အဝအလျားကဲ့ရဲ့မှတိုက်ရိုက်ကဗီဒီယိုပို့ချချက်ရ။
ို့နှငျ့ဆကျ Aspire အဘို့, CSAT GS Prelims နှင့်အဓိက crack ဖို့တို့နှငျ့ဆ toppers ကနေလှည့်ကွက်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုရယူပါ။ ဒါ့အပြင်အဆင့်မြှင့်မျက်မှောက်ရေးရာဗီဒီယိုများ, အပတ်စဉ်မျက်မှောက်ရေးရာဉာဏ်စမ်းပဟေဠိနှင့်အတူနေ့စွဲမှတက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူတို့နှငျ့ဆဒြေထံမှအားလုံးအကြောင်းအရာများအပေါ်ရိုးရှင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ကဗီဒီယိုပို့ချချက် Watch ။
အသိပညာ graph - ပင်ပန်းနွမ်းနယ်အသိပညာ graph ပိုကောင်းသဘောတရားများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အကြံပြုချက်များစိတ်ကြိုက်ကျောင်းသားများကိုသည်။
အလေ့အကျင့် - Feature ကိုကမ်းလှမ်းမှုတိုင်းအယူအဆအဘို့, တက်နွေး run နှင့် Sprint mode ကို။ ဒါကထူးခြားတဲ့ feature ကိုသူတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်မှာကျောင်းသားများကိုစမ်းသပ်ဖို့ခွင့်ပြုနှင့်နားလည်မှုသူတို့ရဲ့အဆင့်ကိုအပေါ်အခြေခံပါတယ်။
ယနေ့သန်း 16 ကျော်ကျောင်းသားများကို BYJU'S ထံမှသင်ယူနေကြသည်။ 93% မိဘများ BYJU'S-အဆိုပါသင်ယူ App ကိုသုံးပြီးပြီးနောက်မိမိတို့၏ကလေးများ၏အဆင့်တစ်ခုတိုးကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ကျောင်းသားများကို BYJU'S ထံမှသင်ယူခြင်းနေ့တိုင်း 57 မိနစ်ဖြုန်းနေကြတယ်။
တစ်နှစ်တာဆုချီးမြှင့်များ၏• Business Standard Start ကို Up ကို (2017)
• Express ကိုအိုင်တီဆုပေးပွဲ - တစ်ဦးချင်းဆု - တစ်နှစ်တာ၏ Newsmaker (2017)
•တစ်နှစ်တာ၏တည်ထောင်ပညာရေး App ကို (2017) အတွက် Amazon က Mobility ကိုဆုပေးပွဲ၏ Winner
•တစ်နှစ်တာဆုချီးမြှင့် (2017) ၏ CNBC TV18 Young ကတူရကီ၏ Winner
• Deloitte နည်းပညာ Winner Fast 50 အိန္ဒိယနှင့်မြန် 500 အာရှ Award ဆု (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
•အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာ App ကို (2016) အတွက် Reimagine ပညာရေးဆုပေးပွဲ၏ Winner
•တစ်နှစ်တာပညာရေးကုမ္ပဏီ (2016) အတွက် VCCircle ဆုပေးပွဲ၏ Winner
•ပညာရေးအိန္ဒိယဆုချီးမြှင့် (2016) ၏အနာဂတ်၏ Winner (စဉ်းစားပါနဲ့ Learn အဖြစ်စာရင်းပေါက်)
ကမ္တာ့မိုဘိုင်း App ကိုဆုချီးမြှင့်-ပညာရေး• Winner (2016)
BYJU'S – The Learning App အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
BYJU'S – The Learning App အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
BYJU'S – The Learning App အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
BYJU'S – The Learning App အား အခ်က္ျပပါ
shaswat-raj စတိုး 219 79.56k
BYJU'S – The Learning App ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း BYJU'S – The Learning App အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.4.2.6853
ထုတ်လုပ်သူ BYJU'S CLASSES
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://byjus.com/privacy_policy/
လက်မှတ် SHA1: 35:0E:F9:61:FA:00:B9:15:E4:41:F8:A2:AF:C5:6A:05:E5:EF:34:C2
ထုတ်လုပ်သူ (CN): byju
အဖွဲ့အစည်း (O): byju
BYJU'S – The Learning App APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ